Myanmar <==> Engish <==> Myanamr
Home About Help Download Contact Member
241367 words 1536 members
အ​ေတ္ထာ အက္ခရ သညာ​ေတာ
အက္ခရာမှန်၊ စာလံုး​မှန်မှ အနက်မှန်ကို သိနိုင်သည်။
အား​လံုး​ရှာ​ေဖွ​မည် ြမန်မာ မှ အဂင်္လိပ် အဂင်္လိပ် မှ ြမန်မာ ြမန်မာ မှ ြမန်မာ ြမန်မာ ဆိုရိုး​စကား​ ြမန်မာ ဘန်း​စကား​
ကွန်ပျူတာသံုး​ အတို​ေကာက်အက္ခရာများ​ အမည် အသံထွက်များ​ စာလံုး​ေပါင်း​သတ်ပံု
ဧရာ ြမန်မာ၊ ြမန်မာ၊ အဂင်္လိပ်၊ ြမန်မာ အဘိဓာန် (ေဒရှင်နရီ) အေြကာင်း
ဧရာ ြမန်မာ ယူနီကုဒ် အဖွဲ့မှ ြပည်တွင်း ြပည်ပရှိ ြမန်မာနိုင်ငံသူ ြမန်မာနိုင်သားများ အတွက် လိုအပ်ေနသည့် ကွက်လပ် တခုအား ြဖည့်ဆည်းေပးသည့် အေနြဖင့် ဧရာ ြမန်မာ၊ ြမန်မာ၊ အဂင်္လိပ်၊ ြမန်မာ အဘိဓာန် (ေဒရှင်နရီ)ကို ြကိုးပမ်းခဲ့ြကြခင်း ြဖစ်သည်။
ဤအဘိဓာန်အား အင်တာနက် အွန်လိုင်း သံုးစွဲနိုင်သူများ အတွက် အွန်လိုင်း၊ သာမန် အိမ်သံုး၊ ရံုးသံုး (လုပ်ငန်းခွင်) ကွန်ပျူတာများအတွက် အင်စေတာ်လာ ပရိုဂရမ်၊ ခရီးေဆာင် ပရိုဂရမ်​နှင့် အွန်လိုင်းစာမျက်နှာ​များ အတွင်း ထည့်သွင်းေပးနိုင်သည့် အွန်လိုင်း​စာမျက်နှာသံုးစနစ်များအား အချိန်တို ကာလ တစ်ခု အတွင်းတွင် ဧရာ ြမန်မာ ယူနီကုဒ် အဖွဲ့မှ ြကိုးစား​ေပးနိုင်ခဲ့သည်။
ဤအဘိဓာန်တွင် ပညာေရးဝန်ြကီး​ဌာန ြမန်မာစာအဖွဲ့မှ ထုတ်ေဝသည့် အဂင်္လိပ် ြမန်မာ၊ ြမန်မာ ြမန်မာ၊ ြမန်မာ အဂင်္လိပ် အဘိဓာန်များ၊ စာလံုးေပါင်း​သတ်ပံုကျမ်း၊ စာ​ေရး​ဆရာ ​ေငွ​ေဒါင်း​ြဖူ၏ ြမန်မာစာ ဆန့်​ကျင်ဘက် ​ေဝါဟာရများ​၊ သံတူထပ်ဆင့်စံုတွဲ စကားလံုးများ၊ သာလွန် အဂင်္လိပ် ြမန်မာ အဘိဓာန်၊ ြမန်မာစကား​ပံု - ၁၉၉၆၊ Myanmar Proverbs - LuZoe(San Lwin) - 1996၊ ြမန်မာ ဘန်း​​စကား​ အဓိပ္ပာယ်နှင့်​​သံုး​နည်း​ ( လှသမိန် )၊ သုခ​မှတ်စု - ဦး​သုခ၊ ​သု​ေတသန အဘိဓါန်များ​ မှတ်စု - ​ေဒါက်တာရီရီ ၁၉၇၄၊ ဆရာ အတ္တ​ေကျာ် (Facebook) မှ အီဒီယမ်​စကား​လံုး​များ​၊ သတ်ပံုအမှန်ြပင်​ေပး​ေရး​ေကာ်မတီ ( www.mmspelling.info )၊ သုေတသီ ဘုန်းြမင့်ေသွး၊ ဆရာ M.T.O တို့၏ ေရွှစကားပံု အဆိုအမိန့်များ၊အား ြပန်လည် ရိုက်ကူး​တင်ဆက်ေပးထားနိုင်ခဲ့သည်။
ြမန်မာနိုင်ငံသူ ြမန်မာနိုင်သားများ အတွက် လိုအပ်ေနသည့် ကွက်လပ် တခုအား ြဖည့်ဆည်းေပးနိုင်ရန် ြကိုးစားရာတွင် ပါဝင်ကူညီခဲ့ြကသည့် နည်းပညာရှင်များ၊ ေဝဖန်၊ ေထာက်ြပ၊ အားေပး၊ ြကိုးစားခဲ့ြကသူများ၊ စာစီစာရိုက်နှင့် အြခားေကျးဇူးတင်ထိုက်သူ အားလံုးအား ေကျးဇူးတင် အထူးတင်ရှိေြကာင်း ေြပာလိုပါသည်။
ကိုစည်သူသွင်၊ မနန်းေနြခည်မင်း၊ ကိုေကျာ်သူ၊ ကိုဥက္ကာ၊ ကိုပိုင်စိုးဇင်၊ မဇာဇာဝင့်၊ ကိုေကျာ်ခိုင်၊ မေမာ်ေမာ်၊ ကိုစိုးမင်း၊ ကိုသန့်သက်ခင်ေဇာ်၊ ကိုစိုင်းခမ်းထွန်း၊ ကိုအွန်း​မွန်၊ ကိုေဇာင်း၊ ကိုလင်းဦး၊ ကိုနဲေလာ်၊ ကိုေဝြဖိုး၊ မမီမီခိုင်နှင့် Myanmar Cupid Community တို့၏ ကူညီခဲ့မှုများကိုလည်း မှတ်တမ်းတင်အပ်ပါသည်။
ဧရာ ြမန်မာ ယူနီကုဒ် အဖွဲ့
Copyright © Ayar Myanmar Unicode Group . Feedback . Help . Twitter . Facebook . Mobile . Contact